Zvauri caching kudiwa panguva kukwereta mari
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvauri caching kudiwa panguva kukwereta mari
Mumakore achangopfuura unmanned kondirakiti michina akava Mitsukareru saka kwese muguta, caching kushanda anofanira kukwanisa nyore pane kare.
pasina nguva dzose zvakakodzera kuita nzira panguva pakaunda, nokuda mubvunzo uye kupindura chidzidzo pamusoro zvinyorwa uye sezvakarayirwa maminitsi mashoma kuti zvave pachena, nekuti ndiani kuongorora zvakakodzera kuti anomukweretesa. Vakati
, nokuti vanhu vari kufunga kuedza kushandisa kekutanga unmanned chibvumirano michina, vorudzii magwaro kunodiwa, unogona kunge kuti tya mhando handizivi kana kuongororwa rinoitwa mu nzira.
Saka nguva ino, isu achasuma zvaunoda panguva caching chikumbiro.
kuzivikanwa pepa kunodiwa
Kana uri Mutengi mari caching, nezvimwewo, chokutanga chinodiwa ndiyo mucherechedzo magwaro.
The kuziviswa Gwaro, rinoreva
? zuva rekuzvarwa
yakavimbika akarondedzera pamutemo kadhi, ane vakawanda mumwe, rezinesi rokutyaira kana pasipoti, etc. zvichava zvakafanana.
panguva chero chikumbiro, unofanira nomumwe anogona yakavimbika vasimbise kuti hapana kukanganisa mashoko.
Uyezve, kuzivikanwa magwaro havadikanwi kuti pasi chepakuvamba, inokosha kudhinda uye pasi mu bhuku-chena dema-uye izvozvo. In
kazhinji kushandiswa chitupa chokutyaira, ndapota cherechedza kuti unofanira kuva bhuku mativi munyaya ino.
kune mumwe, chii chinogona kushandiswa sezvo zvitupa magwaro, mapasipoti uye zvakafanana.
hapana, uye vangobvumira apera, nokuti pane mukana zvokuti ndonda kuzivikanwa magwaro, mashoko nokusimbisa wava Ngatiregei kukanganwa.
Chii chinodiwa zvimwe zviitiko
In dzakawanda mutengi mari, tinoshandisa caching kana paine kuzivikanwa magwaro uye chisimbiso.
, zvisinei, uye kana anokwereta pakati nokukwereta kambani kuva vazhinji, panyaya caching nhamba kwazvo imwe mari, haina kanenge kuti kunodiwa kuti vaparadzane mari uchapupu.
mari gwaro ukama, nokuti vakakwereta mari, ndiwo mashoko nokuda mumwe chete chemhosva kukwanisa kusangana zvikaonekwa.
kuwa ndiko kunonyanya payslips uye achinyima pitikoti, ari muhoro Specification, kuitira kuti aratidze kuti ndiye hwega mari, unogona kukumbirwa kuzviisa pasi pamwe chete, zvakadai yapfuura mwedzi miviri.
caching vamwe nounyanzvi, nokuti anogona kuisa rakapinza kunyange akadai mari gwaro uye mutero cherechedzai, achaita chibvumirano kumeso kuti musavhunduka uye kuchengeta woutsinye uyewo chibvumirano nzira pre-pachake sika uye nounyanzvi.
nyaya vanhu vari kushanda sechiratidzo bedzi proprietor kana akasununguka bakatwa, mari uchapupu chichava mushumo chisarudzo. Nokuti kana iwe uri dhefisiti vakazivisa
rapfuura gore, hapana shoma nyaya kuti nokukwereta kunova nyore.
Chikonzero ichi ndechokuti kutsanangura muganhu rwonzi caching uwandu, avo kuti yaipedzerwa mutemo.
nomutemo uyu, nokukwereta anopfuura chete-muzvitatu mari wepagore rashanduka mashandiro isingagoni kuitwa, I kwemari anova kashoma sezvo kuongorora rakatsiga uye kwete bedzi proprietorship ndiyo caching.
zvichienzaniswa inowanzotorwa nokukwereta, kana iwe chiratidzo mamwe caching, pane nzira kushandisa kuti chikwereti kuti richengetwe nokuda Real Estate.
musha kana hofisi, ndiko kuti anogona kushandiswa kana paine uye mumwe nyika. Mari anogona kuva
nokukwereta vo, panyaya iwe Real Estate achakwanisa kushandisa anenge 50% 70%. zvikwereti
collateralized ne Real Estate, kuwedzera kune pachavo kuzivikanwa magwaro uye mari chitupa, unofanira Real Estate zvitupa magwaro, akadai rugwaro vakanyorwa nyaya.
Kunze ichi, chibvumirano kana zvinodiwa kana kushandisa anondibatsira, ngationei ona kuti zvinokosha kuva akagadzirira kushanda fomu.
caching, kukwereta mari Unofanira kuva zvinyorwa ruzivo vanhu vanogona kuona.
sezvo kuzivikanwa magwaro nokuti, kuti pasi yokuzikanwa unogona kuona kero, runhare gore rekuberekwa.
kuzviisa pasi chero bhuku, kudhinda chikamu Ngaakutungamirire afunge apo aigadzirira kuti varege kuva mutete.
Ukakwereta imwe mari yakawanda, kune vakawanda kuti caching, zvakakosha kusiya kugadzirira zvinyorwa kuratidza okuwedzera kwemari. Kana vanhu vari kuita bhizimisi
vanhu, mutero kudzokera munoziva wokupedzisira fiscal gore wokutengesa uye mubereko zvinoda mari chitupa.
pane rakadzikama mari, ngatiitei pasi sezvo uchapupu kukwanisa kubhadhara.
Uyezve, mutengi mari, pane nyaya kuti tinoda kuisa kurenda coherent mari, inokurudzirwa kuita caching iri Real Estate rubatso.
akaisa sezvo rubatso chivako, akadai hofisi kana musha, nokukwereta kunobvira kana kana tichitarisa pakuverenga chaiye pfuma ukoshi zvinoitwa. Documents kuti akabvuma
zhinji, kusvikira kuongorora kwapera zvinokosha kuva kumahombekombe nguva.